Dadka Safarka ku tagaya Kenya oo Sharuudo Cusub lagu soo Rogay '' Talaalka oo lagu xiray''
HomeWararka CaalamkaDadka Safarka ku tagaya Kenya oo Sharuudo Cusub lagu soo Rogay ” Talaalka oo lagu xiray”
Dadka Safarka ku tagaya Kenya oo Sharuudo Cusub lagu soo Rogay ” Talaalka oo lagu xiray”
January 12, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Maanta 0
Wasaaradda caafimaadka Kenya ayaa ku dhawaaqday dhammaan rakaabka da’doodu tahay 18 iyo wixii ka weyn ee imanaya Kenya inay u baahan doonaan inay keenaan shahaado sax ah oo tallaalka COVID-19 ah oo si degdeg ah u dhaqan galaya .
Dhammaan rakaabka ka baxaya Kenya waxay sidoo kale u baahan doonaan inay soo bandhigaan shahaado sax ah oo ah tallaalka COVID-19, iyo sidoo kale inay buuxiyaan shuruudaha jira ee hoos yimaada Hindisaha Socdaalka.
Tallaalada COVID-19 ee ay ansixisay Ururka Caafimaadka Adduunka waxaa loo arkaa inay ansax yihiin saraakiisha caafimaadka dadweynaha ee Kenya.
Marka laga soo tago tallaalka COVID-19, dhammaan rakaabka da’doodu tahay 5 iyo wixii ka weyn waa inay keenaan shahaado tijaabo ah oo COVID-19 PCR ah oo la bixiyay 72 saacadood gudahood ka hor intaanay dhoofin .
Dhammaan rakaabku waxay sii wadi doonaan inay u baahdaan buuxinta Foomka Ilaalinta Caafimaadka Safarrada, sida looga baahan yahay Wasaaradda Caafimaadka. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan shuruudaha gelitaanka iyo bixitaanka COVID-19 waxaa laga heli karaa bogga macluumaadka COVID-19.
Fiiro gaar ah Sharciga ayaa bilowday 22 December Taxadar ka muujia dhanka Safarkaaga Kenya.